Afar cudur oo dad badan cabsi galiyay sannadkan 2017ka - BBC News Somali
"Waa maxay Kansar?" waa su'aasha ugu badan ee caafimaad ee Google laga raadiyay sannadkan sii dhammaanaya ee 2017-ka, sida warbixin lagu sheegay. Dalka ugu badan ee dadkiisu ay su'aashaasi raadiyeen waa Britain.
Kansarka wuxuu ku bilowdaa in tilmaamaha hidaha ee ku jiro gudaha unugga ay billaabaan in ay kobcaan ayna xad dhaaf noqdaan. Tilmaamahaasi "xun" waxay saameyn wayn ku yeelan karaan nolosha qofka.
Waxyaabaha aan xiriirka la leenahay ee bay'ada waxay sare u sii kicin karaan halista kansarka.
Waxaa jiro laba nooc oo xannuunka macaanka ah - nooca 1-aad iyo nooca 2-aad.
Nooca 1-aad ee macaanka, waa jirka in uu la dagaallamo oo uu baabi'iyo unugyada sameeya insulin-ta, taas oo micneheedu yahay "in aysan jirin insulin la soo saaray".
Finan aan baaba'eyn marka aad tuujiso
Tabar la'aan ama in uusan kici karin
Ka fikir "xannuunkan" haddii canug ka yar shan sano aad ku aragto:
cudur ka dhasha in siksaan la'aanta aad xirato kabaha
Nin qoyskiisa sumeeyay markii uu ku biiray dariiqo
Haweeney lagu qabtay 300 oo kaniin xannuun baabi'iye ah oo Masar ay xabsi ku xukuntay